Google က Smart Display ကို ထုတ်လုပ်လာနိုင်မလား?
5 Apr 2018 . 1:10 PM
အခုခေတ်မှာ Smart Speakers တွေက တဖြည်းဖြည်း ခေတ်စားလာပြီးတော့ အခုဆိုရင် Google Home ၊ Amazon Echo ၊ Apple HomePod တွေအပြင် Xiaomi ၊ LG လိုမျိုး ကုမ္ပဏီတွေကလည်း Smart Speakers တွေကို ထုတ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခု Smart Speakers တွေက သီချင်းနားထောင်နေရင်း Digital Assistant တွေကနေ တစ်ဆင့် အလိုရှိရာခိုင်းစေနိုင်တာက လူတိုင်းအတွက် အကြိုက်တွေ့စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ Google ကနေ Smart Speaker တွေကနေ နောက်ထပ် Smart Product တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးနေပုံပါပဲ။ အခု Google ကနေ ပြုလုပ်နေတာကတော့ Google Smart Display ဖြစ်ပြီးတော့ Google Assistant သုံး Smart Speaker တစ်ခုကို Display တစ်ခုအနေနဲ့ပါ ပေါင်းစပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Google ကနေ အခုလိုမျိုး Smart Display တွေကို ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတာက ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထဲက သတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အခုအချိန်မှာတော့ Project နာမည်နဲ့ အခြားသော အချက်အလက်တွေကိုပါ သိရှိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။
Google က အခု Project နာမည်ကို “Manhattan” လို့ ပေးထားပြီးတော့ 7″ Display အပြင် Google Services တွေဖြစ်တဲ့ YouTube ၊ Google Assistant နဲ့ Google Photos တွေကို အဆိုပါ Smart Display ကနေ အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
Google ကတော့ Smart Home Market ကို အုပ်စိုးတော့မှာလား?
အခုခတျေမှာ Smart Speakers တှကေ တဖွညျးဖွညျး ခတျေစားလာပွီးတော့ အခုဆိုရငျ Google Home ၊ Amazon Echo ၊ Apple HomePod တှအေပွငျ Xiaomi ၊ LG လိုမြိုး ကုမ်ပဏီတှကေလညျး Smart Speakers တှကေို ထုတျလုပျနကွေတာဖွဈပါတယျ။ အခု Smart Speakers တှကေ သီခငျြးနားထောငျနရေငျး Digital Assistant တှကေနေ တဈဆငျ့ အလိုရှိရာခိုငျးစနေိုငျတာက လူတိုငျးအတှကျ အကွိုကျတှစေ့တောပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာတော့ Google ကနေ Smart Speaker တှကေနေ နောကျထပျ Smart Product တဈခုကို ထုတျလုပျဖို့ စိတျကူးနပေုံပါပဲ။ အခု Google ကနေ ပွုလုပျနတောကတော့ Google Smart Display ဖွဈပွီးတော့ Google Assistant သုံး Smart Speaker တဈခုကို Display တဈခုအနနေဲ့ပါ ပေါငျးစပျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
Google ကနေ အခုလိုမြိုး Smart Display တှကေို ပွုလုပျနတေယျဆိုတာက ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလ ၂၀၁၇ ခုနှဈထဲက သတငျးတှထှေကျလာခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ အခုအခြိနျမှာတော့ Project နာမညျနဲ့ အခွားသော အခကျြအလကျတှကေိုပါ သိရှိလာရတာဖွဈပါတယျ။
Google က အခု Project နာမညျကို “Manhattan” လို့ ပေးထားပွီးတော့ 7″ Display အပွငျ Google Services တှဖွေဈတဲ့ YouTube ၊ Google Assistant နဲ့ Google Photos တှကေို အဆိုပါ Smart Display ကနေ အသုံးပွုနိုငျမယျလို့ သိရပါတယျ။
Google ကတော့ Smart Home Market ကို အုပျစိုးတော့မှာလား?